Cabasho laga gudbinayo Cabdiweli Muudey [Akhri Sababta]
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in cabasho ka dhan ah Ku xigeenka Afhayeenka koowaad ee Gollaha Shacabka, Cabdiweli Ibraahim Muudey ay u gudbin doonan gudoonka Aqalka Hoose.
Xildhibaanada ayaa tibaaxay in ashtakooda ay salka ku hayso “in Muudey aanu Sharci-dejiyaashi u ogolaanin inay cabiraan oraahdooda marka uu isaga hayo shir gudoonka, oo ay shalay ugu dambeysay”.
“Muudey wuxuu sameeyay falal xeerka Gollaha baalmarsan….Wuxuu umeelyaa meel uu isaga iska leeyahay oo uu fekerkiisaku ku maamulayo, taasina ma shaqayneyso, Gudoomiyaha ayaan cabasho uga gudbin doonaa,” ayay ku doodeen.
Xildhibaan C/qaadir Cali Cosoble oo kamid ah sharci-dejiyaasha ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay inuu isbedal ku yimaado hab-dhaqanka shir gudoominta Muudey oo ay si adag u dhaleeceeyeen.
Afhayeenka Aqalka Hoose ee Gollaha Shacabka, Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa dalka ka maqan xili la rajaynayo inuu kusoo laabto maalaha soo socda, markaasi oo uu shaqada guda geli doono kadib nasiino.
Muudey oo aad cilqaad dhow la leh Villa Somalia ayaa loo doortay Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee Gollaha Shacabka bishii Janaayo ee sanadkii 2017-dii, kadib doorasho ay ku loolameen Murashaxiin badan.
Khayre oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyo kala dirida Guddiga Maaliyadda BF
Soomaliya 28.11.2018. 23:24
Xildhibaanka ayaa shaaciyay in dalka ay ka jirto xukuumadda aan dooneynin la xisaabtanka...
Khayre iyo Xukuumaddiisa oo lagula taliyay inay is-casilaan
Soomaliya 20.03.2019. 15:00
Duqa Muqdisho oo iska difaacay musuq-maasuq lagu eedeeyay
Soomaliya 25.11.2018. 19:00